Umanisipala weHarare Usungula Uhlelo olweOnline Billing System.
Umanisipala weHarare usesungula uhlelo lokuhlawulisa uzulu imithelo yamanzi lokunye, esebenzisa indlela yemitshina yakulezi nsuku eye Online Billing System.
Inhlanganiso ezimela uzulu weHarare, ziyamukele ngenjabulo lindlela, zisithi linyathelo elincomekayo, elizaphathisa abantu ukuhlawula imali eyiyo hatshi lokho obekusenziwa ngaphambilini.
Lokhu ngokunye kokuvele emva kokubhoda kukamanisipala labenhlanganiso ezizimeleyo lentathelizindaba, emahofisini akhe asesebenzisa lindlela, abalisa awemzini we Kuwadzana, Budiriro, Mufakose, Glenview le Highfields.
Ophethe uhlangothi olubona ngezokukhulumisana lozulu kumanisipala we Harare umnumzana Michael Chideme utshele intathelizindaba ukuba luzakuqheliswa ezigabeni zonke ezingamatshumi amabili lantathu ze eHarare loluhlelo emveni kokubona ukuba luqhuba kanjani kulezondawo ezinhlanu okuqalwe ngazo.
Obenhlanganiso yeZimbabwe Older Persons Organisation, batshengise ukulujabulela loluhlelo bethi ngoba asebekhulile yibo ababhekana lenkinga ezinengi, bengezwisisi ukuba umanisipala ufinyelela njani lezo mali obekuthiwa zihlawulwe nguzulu.
Okusekelwe ngabenhlanganiso yezakhamizi eye Combine Harare Residents Association kanye leye Harare Residents Trust.
Unkosikazi Sithabile Siziba ngomunye wezakhamizi zemzini weKuwadzana lapho osokusetshenziswa khona lindlela otshengise ukulujabulela loluhlelo.
Unkosikazi Siziba uthi kuluhlelo oluzaphathisa ukulungisisa inkinga zikazulu obekhala ngokuthi eyakudala indlela ibihlupha ngokuthi ibiphuza ukungenisa imali esikhwameni esikhulu sikamanisipala eRowen Martin, ngemva kokuhlawula emahofisini alapho ezihlala khona ezamaDistrict Office, obekubangela ukuba zibe sesikweledeni sikhathi sonke, incwadi ezikhomba ukuba kumele umuntu ahlawule malini isize yangezelelwa ngokuzala eyinye eye interest.
Umanisipala lozulu bathi bakhathazekile ngokungaqhubi kuhle umsebenzi kwabamankampani yokusetshenziswa kobulembu beinternet abagoqela iNetone.
Izakhamizi eHarare, zikhuthazwa ukuyabhalisa emahofisini kamanisipala ukuze zanelise ukufinyelela ulwazi oluphathelene lemali okumele bayihlawule ebulenjini kuwebsite yakhe umanisipala.
Inhlanganiso ezimela izakhamizi eHarare, ezimela abaphila ngokuthengisa emigwaqweni, amacouncillors akulezondawo, osomabhizimusi kanye lentathelizindaba baphatheke kuloluhambo lokuyazibonela ukuba isebenza njani lindlela endaweni lapho osolwasungulwa khona.